အင်ဒီဂိမ်း စတူဒီယို Vlambeer ပိတ်သိမ်း
Super Crate Box, Nuclear Throne နဲ့ Ridiculous Fishing လိုမျိုး လူအများနှစ်သက်ကြတဲ့ ဂိမ်းတွေ ထုတ်လုပ်တဲ့ အင်ဒီဂိမ်းစတူဒီယို Vlambeer ကုမ္ပဏီဟာ ပိတ်သိမ်းသွားပါပြီ။ ဆယ်နှစ်သက်တမ်း ပြည့်မြောက်တဲ့နေ့မှာပဲ Vlambeer ဟာ Twitter မှာ ကုမ္ပဏီပိတ်သိမ်းတဲ့ သတင်းကို ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
Today marks Vlambeer’s 10th anniversary, which is way longer than we could've ever imagined. We hadabeautiful run, made incredible games, and worked with amazing people, but it is time for new things. So we're announcing the end of Vlambeer. pic.twitter.com/jZ4dMGxNV2
၂၀၁၀ မှာ ဂျန်ဝီလန်နီမန်နဲ့ ရာမီအစ္စမေးတို့က ဒတ်ချ်စတူဒီယို Vlambeer ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ တည်ထောင်သူတွေကလည် အင်ဒီဂိမ်းလောကအတွက် အားထားရသူတွေပါ။ Vlambeer ဟာ ဂိမ်းတွေ ပုံတူပွားခံရတဲ့ ကိစ္စကို အဓိကထား ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ အစ္စမေးကလည်း အမျိုးအစား မျိုးစုံနဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ ဂိမ်းဖန်တီးမှုအပေါ် ထောက်ခံပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
Vlambeer ဟာ Ultrabugs ဆိုတဲ့ arcade ဂိမ်းသစ်ကို ထွက်ရှိဖို့ ဆန္ဒရှိပါသေးတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ Vlambeer ဆယ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် Steam မှာ ဂိမ်းကို ရောင်းချနေပါတယ်။